प्रवाशी नेपालीको पीडामा मलम लगाउदै लक्ष्मण – Radio Jajarkot 105.6 FM
Home / खबर सेरोफेरो / प्रवाशी नेपालीको पीडामा मलम लगाउदै लक्ष्मण
प्रवाशी नेपालीको पीडामा मलम लगाउदै लक्ष्मण
Posted on September 18, 2016 by radiojajarkot in खबर सेरोफेरो, राष्ट्रिय, विशेष, समाज
पाठक संख्याः 1,610
देशमा लामो राजनीतिक संक्रमणले लाखौं नेपालीहरु विदेशी भूमिमा पुगेर आफ्नो पसिना बगाउन बाध्य छन् । नेपालमा रोजगारीको अभावले आर्थिक अवस्था नाजुक हुदैगएपछि रोजगारीका लागि खाडी लगायतका मुलकमा सिर्जनसिल र देशका मेरुदण्ड मानिने युवाहरु आफ्नो रगत पसिना चुहाईरहेका छन् ।
पराई देशमा पसिना चुहाउने रहर कसको हुन्छ र ? तैपनि आफ्नो गाउँ, घरपरिवार, आमाबुवा, जीवनसाथी अनि प्रिय साथीसंगी चटक्क भुलेर अर्काको देशको गुलामी गर्नु लाखौं नेपाली युवाहरुको नियती बनेको छ । राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर हुदा देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसकेका छैनन् । आफैंले केही गर्न आर्थिक लगानी पनि हुनुपर्यो । त्योपनि छैन ।
विदेशमा पुगेर अर्काको माटोमा श्रम गर्दा कसको मन पोल्दैन । हरेक सच्चा नेपाली मनको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ । तर, पनि बाध्यता र विवशताका अगाडी मान्छे लाचार हुन्छ । आफ्नो रोजीरोटीका लागि जुनसुकै काम गर्नपनि मान्छे पछि पर्दैन । यो कटु यथार्थ हो । यद्यपी विदेशी भूमिमा काम गर्नु तल्लो स्तरको काम नभएपनि सच्चा देशभक्त नेपालीका लागि नैतिक रुपमा आफ्नो स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कार्य भने अवश्य हो ।
जाजरकोटको दुर्गम गाउँ डाँडागाउँ ७ का लक्ष्मण रसाईली केही वर्ष देखि खाडी मुलुक कतारमा रोजगारीका सिलसिलमा रहँदै आएका छन् । उनको खास नाम लक्षीराम विक हो । तर, सानै उमेरमा सामाजिक सेवामा लागेका उनी लक्ष्मण रसाईलीको नामले परिचित छन् । विदेशी माटोमा आफ्नो रगत पसिना बगाउने रहर लक्ष्मणलाई पनि कहाँ हो र ? ‘शिक्षा संकायबाट प्रविणता प्रमाणपत्र उतिर्ण गरेका रसाईली स्वदेशमा बसेर केही आर्थिक उपार्जनका कार्य गरुँ, घरपरिवारको साँझ विहानको रोजीरोटी टार्न सफल होउँ ।’ उनको यही सपना थियो । उनलाई लाग्थ्यो – ‘आफ्नो देशमै बसेर केही गरुँ । घरपरिवारको साथमै रहेर गाउँमा केही सानोतिनो काम गरुँ । विदेशी माटोमा गएर आफ्नो स्वाभिमान किन बेच्नु ?’
तर, मान्छेले सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ? फेरि हामी जाजरकोटी राज्यबाट ठगिएका । राज्यले जाजरकोटलाई हेर्ने दृष्टिमै कमजोरी छ । ‘यहाँबसेर आफूले केही गर्न असंभव छ । घरपरिवार पाल्न भएपनि विदेश जा ।’ उनको ब्रम्हले यस्तै भन्यो । छातीमा ढुंगा राखी केही पैसा जुटाएर कतार हान्निए, उनी ।
मान्छेहरु सोच्छन्, विदेशमा पैसाको रुख हुन्छ । मात्र त्यसलाई टिप्न सक्नुपर्छ ।
तर, विदेशमा सोचेजस्तो छदै थिएन । उनले स्यानो काम त पाए, तर सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । जबकी उनी विदेशी भूमिमा आउनु नै बाध्यता थियो । पैसाका लागि उनीले आफैलाई बेचेका थिए । आफ्नो आत्म सम्मान, स्वाभिमान सबै उनको बन्धकी थियो । केवल घरको आर्थिक विपन्नताका कारण । घरको बाध्यताका कारण । घरमा आमाबाको एकसरो नयाँ कपडाको लागि ।
उनी कम्पनीको ड्युटीमा जान्थे । तर, मन भने नेपालमा हुन्थ्यो । आफ्नो घर, साथीसंगी र पाखापखेरामा डुलीरहेको हुन्थ्यो । साथीभाईहरुसँग नलगाडमा माछा मारिरहेको सम्झना गर्थे, उनी । कहिलेकाँही अनलाईन र सामाजिक संजालमार्फत साथीभाईहरुसँग गफगाफ गर्थे । सामाजिक संजाल हेर्दै गर्दा विदेशमा नेपालीहरुले भोग्नुपरेका पीडा र दुःखका समाचारमा उनका आँखा पुग्थे । उनलाई यस्ता समाचारले साह्रै नरामाईलो लाग्थ्यो । मन दुख्थ्यो, बेचैनी हुन्थ्यो । कहिलेकाही नेपालीहरुले भोग्नुपरेका पीडाले थाहै नपाई आँखाबाट आँशु खस्थ्यो ।
उनले मनमनै संकल्प गरे – ‘अब जसरी भएपनि नेपाली साथीहरुका लागि हामी नेपालीले नै केही सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुका दुःखमा नेपालीनै साथी बन्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो योजना आफ्ना केही नेपाली साथीहरुलाई पनि बताए । उनीहरुले पनि लक्ष्मणको योजनामा सही थापे । असल कामका लागि साथ दिने असल साथी नै हुनपर्छ भनेजस्तै ।
लक्ष्मणका साथीहरु पनि असल गुणका थिए । उनीहरुलाई पनि पीडा हुन्थ्यो, नेपालीहरुको पीडामा । र, त लक्ष्मणको योजनाले मुर्तरुप लियो । उसो त नेपालमा रहँदा पनि लक्ष्मण सानो तिनो सामाजिक सेवाका कार्यहरु पनि गर्थे । साहित्य र पत्रकारिता मार्फत आफ्नो गाउँ र जिल्लाका लागि, आफ्नो गाउँका लागि उनले कलम चलाईरहेका हुन्थे । सबै मान्छेमा मानविय गुण हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर, मान्छेमा मानविय गुण भएमा भौगोलिक रुपमा जहाँ भएपनि, जहाँ गएपनि उक्त गुण जसरी पनि प्रस्फुटन हुदोरहेछ ।
केही नेपाली साथीहरुको सहकार्यमा लक्ष्मणले कतारमा पनि सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले जाजरकोट प्रवाश सेवा समाज गठन गरे । यद्यपी उनले संस्था गठन गर्नुपूर्व पनि समस्या र दुःखमा परेकाहरुलाई सहयोग नगरेका भने होईनन् । तर, आफूहरुले संगठीत भएर सहयोग गर्दा पीडितलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी होस् भन्ने हेतुले यो समाज गठन गरेको उनले बताए । हालसम्म लक्ष्मणको समूहले आधा दर्जन बढी युवाहरुलाई उद्धार गरिसकेका छन् । दुःखमा परेकाहरुको उद्धार गर्दा आत्मसन्तुष्टी मिलेको लक्ष्मणको भनाई छ ।
हिजो आज लक्ष्मण आफ्नो जागिरीसँगै नेपालीहरुले कही कतै दुःख पाए कि ? कतै समस्यामा परेका छन् कि भनेर सँधै चिन्तनसिल रहन्छन् । लक्ष्मणको निस्वार्थ समाजसेवा फैलिदैं जावस् । उनमा भएको समाजसेवाको भाव सँधै जीवन्त रहोस् । शुभकामना ।
(लक्ष्मण रसाईलीसँगको कुराकानीमा आधारित)
गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट रेडियो जाजरकोट एफएमको औपचारिक उद्घाटन
नाबालिका बलात्कार गर्नेलाइ १६ वर्ष जेल
शिक्षकलाई धम्की: पठनपाठन ठप्प